Global Aawaj | क्वाडविरुद्ध सम्झौता गर्दै चीन र रसिया, तनावमा भारत क्वाडविरुद्ध सम्झौता गर्दै चीन र रसिया, तनावमा भारत
क्वाडविरुद्ध सम्झौता गर्दै चीन र रसिया, तनावमा भारत
१२ चैत्र २०७७ 1:14 pm
एजेन्सी । चीन र रसियाले क्षेत्रीय सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ प्लेटफर्म सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यसलाई ‘क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता फोरम’ भनिएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी र उनका रूसी समकक्ष सर्गेई लाभ्रोफको दक्षिणी चिनियाँ शहर गुइलिनमा भएको छलफलपछि यो प्रस्ताव आएको हो।बैठकमा दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले क्षेत्रीय द्वन्द्वका लागि साना समूह गठन गरेकोमा अमेरिकाको चर्को आलोचना गरे । यो बैठक मार्च १९ मा युएस-चीन शिखर सम्मेलन र मार्च १२ मा क्वाड शिखर सम्मेलन पछि भएको थियो।
दुबै पक्षले संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन्, ‘दुबै पक्षले यस क्षेत्रका देशहरुको सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्न नयाँ सहमतिका लागि ‘क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता फोरम’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखेको छ।’ चीन र रसिया पहिले नै शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)को सुरक्षा समूहको हिस्सा छन्, जसमा भारत पनि पर्छ। उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास गर्दछ कि संयुक्त राज्य अमेरिकाले हालका वर्षहरुमा विश्वव्यापी शान्ति र विकासको क्षतिलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ, अन्य देशहरुका घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै र साना क्षेत्रीय द्वन्द्वका लागि स्मोकिंग समूहहरू रोकिनु पर्छ।’ यस बैठकमा अमेरिकालाई चीन र रुसले पूर्ण रूपमा लक्षित गरेको थियो। साना समूहको गठनको बारेमा अमेरिकालाई चेतावनी दिइएको छ, इशारा चार देशहरूको समूहतर्फ हो। क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता फोरमको प्रस्ताव पनि क्वाडको सामना गर्न बनाउन लागिएको देखिन्छ ।
क्वाड भनेको के हो ?
चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, जसलाई क्विड पनि भनिन्छ, अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलियाबीच एक अनौपचारिक राजनीतिक वार्ता समूह हो।सन् २००७ मा जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले पहिलो पटक प्रस्ताव गरेका थिए । जुन भारत, अमेरिका र अष्ट्रेलियाले समर्थन गरेको हो। यसपछि उनीहरुको नियमित बैठक बस्दै आइरहेको छ ।
क्वाडको स्थापना हुनुको कारण चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्ने भनिन्छ। अमेरिकाले चीनलाई बढ्दो चुनौतीको रूपमा देखेको छ। दुई देशबीचको व्यापार युद्धबाट बयानबाजी आन्तरिक मामिलामा धेरै पटक खुल्यो। उही समयमा अस्ट्रेलिया र जापानको पनि दक्षिण चीन सागरमा चीनसँग टकराव छ। भारतसँग चीनसँगको सीमा विवाद धेरै वर्ष पुरानो छ र हालै दुबै देशको सीमाना लद्दाखको सिमानामा आमनेसामने भएका छन् । चार सदस्य देश क्वाड सुरक्षा वार्ताबाट भारत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र जापानको क्षेत्रको एक प्लेटफर्ममा भेला भएका छन्।
क्वाडप्रति चीन र रसियाको आपत्ति
चीन र रसिया दुवैले क्वाडमा आफ्नो आपत्ति जनाएका छन्। चीनका उप विदेश मन्त्री लुओ झाओउइले पनि क्वाडलाई ‘चीन विरोधी फ्रन्टलाइन’ वा ‘मिनी’नाटो’ भनेका छन्। विज्ञहरू विश्वास भन्छन्, ‘चीनमा चिन्ता छ कि क्वाड समूह भविष्यमा चीन(विरोधी आकार लिएर यसलाई खतरामा पार्न सक्छ।’ साथै, रसियाले यसमा चीनलाई पूर्ण समर्थन गरेको छ। रसियाले क्वाडबाट यसको क्षेत्रीय सुरक्षामा खतराको चिन्ता पनि व्यक्त गरेको थियो।
यसले क्वाड देशहरूमा भएको ‘बेका’ सम्झौताको बारेमा पनि चिन्ता उठाएको छ। बेकाको अर्थ मूल विनिमय र सहयोग सम्झौता हो। यो सम्झौता अन्तर्गत, भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले अत्याधुनिक सैन्य प्रविधि, उपकरण र भू-स्थानिक नक्शा एक अर्कासँग साझा गर्नेछन्।
अमेरिकी चुनौती र चीन-रूसको सम्बन्ध
धेरै जसो केसहरूमा रूस र चीन लामो समयदेखि सँगै आएका देखिएको छ। दुबै देशका कथनहरु निकट र सकारात्मकता देखाउँछन्।चिनियाँ राष्ट्रपति शी जिनपिङले जुन सन् २०१९ मा तीनदिने भ्रमणको अवधिमा रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनलाई आफ्नो ‘सर्वश्रेष्ठ मित्र’ भनेका थिए। त्यस समयमा चीन र अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध चलिरहेको थियो र दुबै आपसमा लगातार ट्यारिफ बढाइरहेका थिए।यसका अतिरिक्त अमेरिकी प्रतिबन्धको बाबजुद पनि चीनले रसियासँग व्यापार गरिरहेको छ।
दुवै देशले अफगान-तालिवान वार्तामा पनि प्रमुख भूमिका खेल्दैछन्। दुबैले धेरै मुद्दाहरू र क्षेत्रहरूमा निकटता देखाएका छन्।
रसिया र चीनको निकटता र क्वाडले खडा गरेको चुनौतीले क्षेत्रीय सुरक्षाको लागि छुट्टै प्लेटफर्मको धारणालाई जन्म दिएको छ।
दिल्लीस्थित अवलोकनकर्ता अनुसन्धान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. हर्ष पंत भन्छन्, ‘शीतयुद्धको समयदेखि नै रूस र चीन राष्ट्रविरोधी भइरहेका छन्। तर आज ती दुवै एकै प्लेटफर्ममा साथीहरू जस्तो देखिन्छन्। वास्तवमा यस समयमा चीन र रूस दुबै पश्चिम-विरोधी एजेन्डामा चलेका छन्। अमेरिकाबाट आएको चुनौतीले विगत केही वर्षहरूमा दुई देशलाई एक साथ ल्याएको छ।’
‘रसियाको विदेश नीति पनि यो समयमा पश्चिमी देशहरूको विपक्षमा आधारित छ। उही समयमा, अमेरिका पनि निरन्तर अमेरिकाको लागि लक्षित छ। यस तरीकाले दुबैको चासो एक अर्कामा जोडिएको छ। त्यसकारण उनीहरू एकसाथ अमेरिकाको चुनौतीको सामना गर्न चाहन्छन्।’
अमेरिकाले चीनमा विगर मुस्लिम र हङकङमा भएका विरोध प्रदर्शनमा धेरै पटक मानवअधिकारको मुद्दा उठाउँदै आइरहेको छ । दुई देशबीच सन् २०१८ १९मा व्यापार युद्ध चलिरहेको थियो । उही समयमा चीन र भारतबीचको सीमा विवादमा अमेरिकाले खुल्लमखुल्ला भारतलाई समर्थन गरेको छ।
हालसालै युरोपियन युनियनले सिनज्याङ प्रान्तमा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आरोपमा चीनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ जसलाई चीनले पनि प्रतिवाद गरको छ । रसियाको बारेमा कुरा गर्दै, हालसालै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेनले भ्लादिमीर पुटिनलाई हत्यारा भनेका थिए । जवाफमा पुटिनले ‘फेस टु फेस’ वार्ता गर्न चुनौती दिए । हालसालै दिएको उक्त अन्तर्वार्तामा बिडेनले भनेका छन्, ‘रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनले चुनावमा छेडछाड गरेको आरोपको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।’
हर्ष पंत भन्छन्, ‘चीन र रूस दुवैले अमेरिकालाई ठूलो समस्याका रूपमा देखिरहेका छन्। क्वाडको बारेमा पहिले त्यति गम्भीरता थिएन। चीन पनि यसमा चिन्तित थिएन। भारत पनि यसमा सामेल हुन हिचकिचायो। तर अब क्वाड देखेर क्वाड जमिनमा उत्रियो र यसको भर्चुअल सम्मेलन पनि भयो।’उही समयमा, चीनको बिडेन प्रशासनमा केहि परिवर्तनको अपेक्षा पनि हराइसकेको छ। बिडेन पनि चीनको बारेमा त्यत्तिकै आक्रामक छन् जति डोनाल्ड ट्रम्प थिए। त्यसकारण रूससँगै चीनले अमेरिकालाई चुनौती दिइरहेको छ।
हर्ष पंत भन्छन्, ‘यो पनि एक प्रकारको दबाब राजनीति हो। जब एक शक्तिशाली देश लाई चुनौती दिईन्छ, यो देखाउन चाहन्छ कि यो कुनै पनि भन्दा कम छैन। दुबै देशहरू पनि अमेरिका र यसका सहयोगीहरूलाई यो सन्देश दिन चाहन्छन् कि उनीहरूले पनि क्वाडको तर्फबाट प्रणाली बनाउँदछन्।’
चिसो युद्धबाट परिस्थितिहरू
भौगोलिक राजनैतिक वातावरणमा यी नयाँ गठबन्धनहरूले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई असर गर्ने आशा गरिन्छ। अमेरिकाले एसियामा आफ्ना सहयोगीहरूको खोजी गरिरहेको छ भने चीन र रसियाले पनि उनीहरूको सहयोगीहरूको खोजी गर्न थाल्नेछ। त्यसो भए त्यहाँ धेरै देशहरूको अगाडि एउटा चुनौती हुनेछ कि उनीहरू कुन पक्षमा जान चाहन्छन्।
लन्डनको सिटी युनिभर्सिटीका भ्रमण गर्ने साथी अतुल भारद्वाज भन्छन्,‘ एक किसिमले विश्व शीत युद्ध जस्तो अवस्थामा पुगेको छ जुन यस पटकको केन्द्र एशिया हो।’
उनी भन्छन्, ‘चीन आर्थिक स्तरमा अन्य देशहरूसँग र अमेरिकी सेनाको तहमा अमेरिकासँग सम्बन्धित छ। त्यसकारण भविष्यमा अमेरिका र चीनको बीचमा कसरी सन्तुलन राख्ने भन्ने सबै देशको अगाडि एउटा चुनौती हुनेछ।’
‘इरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वा युरेपियन देशहरू चीन र रसिनमा सामेल हुन सक्छन्। तिनीहरूले उत्तर कोरियाबाट पनि समर्थन प्राप्त गर्न सक्दछन्। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ किसिमको फोका छ।’
उही समयमा हर्ष पन्त भन्छन्, ‘यी सर्तहरूले त्यस्ता संगठन वा गठबन्धनहरूको गठन गर्न बाध्य पार्छ जुन शित युद्दको उपस्थिति दिन्छ। आजको वातावरणमा, बिखण्डन भएको छ। यो विखंडन व्यापार र टेक्नोलोजीमा पनि देखिन्छ। गत वर्ष जस्तै बेलायतले भनेका थिए कि विश्वका प्रजातान्त्रिक देशहरूले भेला गरेर ५-जी बनाउनु पर्छ। यसको लागि तपाइँ किन चीनमा निर्भर हुनुपर्दछ ?’
यद्यपी, यो कुरा पनि याद गर्नुपर्दछ कि सोभियत संघको समयमा चीन र अमेरिका पनि एक अर्कामा निर्भर थिए। यसैबीच चीन अहिलेसम्म यति शक्तिशाली हुन सकेको छैन कि त्यसले अमेरिकालाई सीधै चुनौती दिन सक्छ। तसर्थ, त्यहाँ चिसो युद्धको स्थिति छैन, तर देश निश्चित रूपमा विभाजित छ।
भारतको लागी चुनौती
एशियाली देशहरूले सामना गर्ने चुनौतीबाट भारत पनि अछूत छैन। अबदेखि भारतको लागि भ्रमको स्थिति छ। भारत अगाडि पहिलो चुनौती रुसको बारेमा छ। रसिया र भारतको सम्बन्धमा धेरै गहनता आएको छ। रसियाले जहिले पनि भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा समर्थन गरेको छ। उही समयमा भारतले आफ्नो अधिकांश हतियार रूसबाट किन्छ।
यद्यपी, पछिल्लो समयदेखि दुवै देशबीचको सम्बन्धमा तनाव देखिएको छ। रसियाले चीनसँगको मित्रता बढाउँदै छ र हालसालै पाकिस्तानसँग सैन्य अभ्यास पनि गरिसकेको छ। उही समयमा अमेरिकाले रसियाबाट एस-४०० मिसाइल प्रणाली किन्न खोजिरहेको छ। उसले भारतलाई एक ठूलो रक्षा बजारको रूपमा पनि देख्छ। यस कारणले गर्दा, भारतलाई उनीहरूको नयाँ र पुरानो मित्र बीच सन्तुलन कायम गर्न गाह्रो भएको छ।
हर्ष पंत भन्छन्, ‘भारत रसियासँगको सम्बन्ध सुदृढ रहेको चाहन्छ। तर, यदि रूस चीनको नजीक नजिक पुगेको छ भने भारतले पनि रूससँग सम्बन्ध सुधार गर्न कसरी आवश्यक छ भनेर मूल्याकंन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ पनि भारतको बाध्यता छ र चीन यसभन्दा पहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै छ। त्यसकारण रूसले यो पनि बुझ्नुपर्दछ।’
‘चीन र रसिया सम्बन्धको आधार पश्चिमी विपक्षी हो जसमा भारतले समर्थन गर्न सक्दैन किनकि चीनसँगको गतिरोधमा अमेरिकाले खुल्लमखुल्ला भारतलाई समर्थन गरेको छ र रूसले मेलमिलापको लागि प्रयास गरेको छ। यहाँ दुबै देशको हित पूर्ण रूपले टकराउँछ। यस्तो अवस्थामा, दुई देशहरू विपरीत धारामा सवार भएर कसरी एकसाथ बस्छन् भनेर हेर्नुपर्दछ।’पंतले भने ।
त्यस्तै इरान र अफगानिस्तान जस्ता देशहरू पनि भारतको नजीक छन्, जुन परिवर्तनकारी समीकरणमा चीनको नजिक पुगेको छ। त्यसकारण यो भारतको लागि गाह्रो अवस्था हुन सक्छ।
अतुल भारद्वाज भन्छन्, ‘भारत एससीओ र आरआईसी (रुस, भारत र चीन) समूह र क्वाडमा पनि संलग्न छ। यदि परिस्थिति अझ गम्भीर भयो भने प्रश्न उठ्नेछ कि भारत कसरी दुबै मिलेर बस्न सक्छ। यद्यपी, भारत सरकारले यस अनिश्चित संसारमा कसरी हाम्रो चासो राख्ने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्दछ।’ बदलिने गठबन्धनहरूको बीचमा, अमेरिका वा चीन पनि अन्य धेरै देशहरूको अगाडि एउटा ठूलो प्रश्न हुनेछ। –बीबीस